1. Banyere achịcha dị iche iche Na ememme obi ụtọ Dị oké mkpa N'ihi na isi nke achịcha dị iche iche jupụtara n'ụlọ ahụ ma mepụta mmetụ dị ọkụ n'oge oge na-abịanụ. Ma ihe ndị dị na achịcha dị iche iche na-eme ka ha mara mma iri nri ma gbakwunye ọhụụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Kama ịzụta ya na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ebe a na-eme achịcha Nwere ike ọ gaghị adị iche iche ma nweta uto pụrụ iche Taa, anyị ga-agwa gị otu esi eme buttermilk dị mfe iji chọọ achịcha dị iche iche iji mepụta ọnụ ọchị na obi ụtọ. Gịnị bụ buttermilk?
2. Ka anyị mata ihe buttermilk bụ nke mbụ. Ha bụ ihe ndị a na-eji eme achịcha na achicha. A makwaara dị ka ọdụ butter Ọ bụ ndị fọdụrụ site na-eme butter cream. Nke a ka akpọrọ churning, ma mmiri mmiri nke ọzọ bụ buttermilk. Ma ọ bụ mmiri ara ehi gbara ụka Localfọdụ obodo dị ka Europe A na-ejikarị ya esi nri Fọdụ ndị na-achọkwa ị drinkụ ya n’ihi na o nwere otu ihe ha na-enweta dị ka mmiri ara ehi, ma ọ naghị enwe abụba. Ngwurugwu Buttermilk • Jiri 1 iko mmiri ara ehi zuru oke, mmiri ara ehi, nke na-abụghị skimmed (2% abụba) mmiri ara ehi • mmiri ara ehi dị ka mmiri lemon ma ọ bụ 1 scoop ọcha mmanya. tebụl
3. Otu esi eme buttermilk arụrụ n'ụlọ Wunye 1 ngaji nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ma ọ bụ vinaigrette kwa iko 1 nke mmiri ara ehi, ọkacha mma dị larịị ma ọ bụ mmiri ara ehi abụba 2%, mana mmiri ara ehi adịghị mma. N'ihi na anyị na-eji abụba eme ka mmeghachi omume
4. Ghichaa ihe ndị ahụ ma hapụ maka 5 - 10 nkeji, wee jiri ngwa ngwa tụọ ngwa ngwa. Ruo mgbe mmiri ara ehi malitere ịmalite coagulate n'ime obere lumps. Ruo mgbe ọ ga-amalite ito Enwere ike Otu esi eme buttermilk anyị. Nwere ike ị nweta nsonaazụ na-esighi ike dị ka ndị azụrụ site na nnukwu ụlọ ahịa. Ma kwere na ịdị ọcha Ma ọcha eke flavors agwakọta ya na nlekọta ike kacha mma na-atọ ụtọ ezinụlọ eji megharịa ọnụ mmiri.
5. Nchịkọta ejiri mee buttermilk Enwere ọtụtụ menus na-eji buttermilk eme ụlọ. Wunye na pancakes, jiri mkpụrụ osisi na mmanụ a decorateụ chọọ mma. Mgbe ahụ ị ga - enweta ntụ ọka pakeki pụrụ iche nke na - atọ ụtọ ma na - esi isi nke nwere obere utoojoo na mmanụ griiz nke ndị ezinụlọ niile ga-eri.
6. Ma obu tinye ya na poteto a ghere eghe ma mee ha ka ha buru otu anu. Na-arụ ọrụ na ọgịrịga gasị Ọ ga-atọ ụtọ nke ukwuu. Mee ka achicha mara mma nke achicha n’oge ememme Afọ Ọhụrụ. Ga-eme n'ezie ka akụkụ nke ụtọ pụrụ iche Nke ka mkpa, enwere ike ịme ya na ezinụlọ gị na ụmụaka.Kwe ka buttermilk a na-eme n'ụlọ mee ka nri gị sie ụtọ. Mee ya n'onwe gị, na